तपाईको आफ्नो राम्रो वा नराम्रो बानीले बच्चामा कस्तो प्रभाव पार्दछ? - परिकल्पना
तपाईको आफ्नो राम्रो वा नराम्रो बानीले बच्चामा कस्तो प्रभाव पार्दछ?
Ramji Acharya 9/26/2021
Edited on 2021-09-26T09:26:29Z
विवाह होस् वा व्रतबन्ध, पारिवारिक होस् वा साथीभाइसँग जमघट, हरेक सभा, समारोहमा मदिरा अनिवार्य हुन्छ । परिवर्तित जीवनशैलीमा आफूलाई अभ्यस्त गराउन मदिराको सेवन गर्नु अब नेपाली समाजमा खासै नौलो रहेन । तथापि जमघटको नाममा दिनहँु मदिराको सेवन गर्दाचाहिँ व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र नभई त्यसको असर पूरै परिवारले समेत भोग्नु पर्छ । अझ घरमा बालबालिका छन्, भने त्यसको असर सबैभन्दा धेरै बालबालिकालाई नै हुने गर्छ ।
घरमा आमा, बाबु वा दुईजनामा मदिराको कुलतमा फसेका कारण उनीहरूको अधिकांश समय मदिरा सेवन गर्नमै बित्ने गर्छ । जसका कारण बालबालिकाले आफूलाई लागेको कुरा अभिभावक समक्ष खुलस्त भन्न सक्दैनन् । साथै उनीहरूको स्याहार समेत राम्रोसित हुँदैन । कतिसम्म भने बालबालिकालाई कुनै रोगको संक्रमण भएमा समेत उनीहरूको उचित उपचार हुन सक्दैन । यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाहरूमा त पर्छ नै । बालबालिकाको मनोविज्ञान तथा वृद्धिविकासमा समेत यसको असर देखिने गर्छ ।
मदिराले बालबालिकालाई कसरी असर गर्छ?
आमाबाबुले अत्यधिक मदिराको सेवन गरेमा त्यसको असर सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई पर्छ । उनीहरू सधैभरि तनावमा रहनुका साथै उनीहरूको अधिकांश समय आमाबाबुले मदिरा गर्नुको कारणबारे सोच्दैमा बित्ने गर्छ । -आफ्ना अभिभावकले अत्यधिक मदिराको सेवन गर्छन् भन्ने कुरालाई बालबालिकाले स्वीकारे पनि समाजका कारण ती बालबालिका अरूसित सजिलै घुलमिल हुन सक्दैनन् । यसबाट उनीहरूले एक्लो महसुस गर्न थाल्छन् ।
-त्यति मात्र हैन, यस्ता सामाजिक परिवेशमा हुर्केका बालबालिकाले आफ्ना कुरा अरूसित खुलस्त भन्न सक्दैनन् । जसका कारण उनीहरूले आफ्नो भावना दबाउने गर्छन् । उनीहरूमा तनाव तथा डिप्रेसनको समस्या निम्तने गर्छ । -घरमा आमाबाबु दुवैले मदिरापान गरेमा त्यस्तो घरको वातावरणले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा त असर पर्छ नै । साथै, उनीहरूको पढाइलेखाइ, बुझाइ, स्वास्थ्य लगायतको सोच्न सक्ने क्षमतामा समेत असर पर्छ । – यस्ता बालबालिकामा आत्मसम्मानको अभाव, विश्वासको कमीका साथै धेरै तनाव रहने गर्छ, जसका कारण बालबालिका पछि गएर कुनै पनि कुरा गर्नबाट निरुत्साहित हुन्छन् ।
यस्तो वातावरणबाट बालबालिकालाई टाढा राख्नु प्रत्येक अभिभावकको जिम्मेवारी हो । कर्तव्य हो । यसको लागि प्रत्येक अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अत्यधिक मदिराको सेवन गर्ने व्यक्तिबाट टाढै राखेर पनि यो समस्या कम गर्न सक्दछन् । अत्यधिक मदिराको सेवन गर्ने व्यक्तिलाई मदिरा सेवन गर्नबाट निरुत्साहित गरेर, मदिरा छुटाउने ठाउँको बारेमा सही जानकारी दिएर तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा जाने सुझाव दिएर पनि यो समस्या हल गर्न सकिन्छ । यतिले पनि नभएमा भने अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिबाट टाढा भएर पनि बालबालिकालाई यस्तो परिवेशबाट टाढा राख्न सकिन्छ ।